ISierra Leone-Holley Technology Ltd.
Ubonelelo ngeMali yoMthengisi waseSierra Leone kwiProjekthi yokuThunyelelwa kweeMtha zokuQala kunye neZincedisi
URhulumente waseSierra Leone ngeSebe lezaMandla kunye noMbane
I-Distribution and Supply Authority (EDSA) ijonge ukubandakanya iinkampani zabucala kwisivumelwano senkqubo-sikhokelo yenkxaso-mali yomthengisi wenkqubo yesitokhwe esithunyelwayo semitha ehlawulwa kwangaphambili kwaye icela izindululo kumahlakani abucala abekekileyo ukuze afumane ilungelo le-arhente lokubonelela kunye nokuthengisa imitha yombane wekhadi egameni uMbane
IGunya lokuSasaza kunye noNikezo (EDSA) isithuba seminyaka emithathu ngokuxhomekeke ekuhlaziyweni.
Ixesha leProjekthi:Ukusukela ngoAprili 2019 ukuza kuthi ga ngoku (iprojekthi isaqhuba).
Ngo-Epreli wama-2019, iHolley kunye neNkampani A iphumelele ukubhida koMthengisi ngeMali yeSitokhwe seSitokhwe sokuQala seNtlawulo kunye neZincedisi.Iprojekthi yiSierra Leone MOE/EDSA njengequmrhu elithengayo kunye nenye yeLoti, ukuza kuthi ga ngoku bekukho phantse amawaka angamashumi asibhozo eSmart Single kunye neSigaba esiThathu seSTS esiDityanisiweyo seemitha zaMandla aHlawulelwayo aNeemitha ezibiyelweyo kunye neZincedisi ezibonelelweyo zaza zafakelwa.
Umda weNkonzo kuku:
● Unikezelo kunye novavanyo lweSigaba esinye neSithathu seSigaba se-STS esiDityanisiweyo esiHlawulelwa kwangaphambili
Iimitha zombane ezineemitha ezibiyelweyo kunye neZincedisi;
● Ubonelelo kunye novavanyo lwe-UIU kumajelo onxibelelwano ayimfuneko,
● Unikezelo kunye novavanyo lwethekhinoloji efanelekileyo ngababoneleli nge
uvavanyo kunye noqinisekiso lwe-EDSA;
● Ubonelelo ngeNkqubo yokuThengisa (HW/SW) kunye neenkonzo zoqeqesho lwaBasebenzi be-EDSA (10) ekufakeni nasekusebenzeni kwenkqubo yokuthengisa, OKANYE Ukuqhuba udibaniso neNkqubo yokuThengisa yangoku (CONLOG).
Ubonelelo lokudityaniswa nenkqubo yolawulo lwezorhwebo.
Ukudityaniswa neNqanaba lezicelo zentengiso kwicala le-Multiple Integrators
● UHolley kufuneka abonise emva kwenkxaso yokuthengisa ngokumalunga nobonelelo lwezitshixo, ukugcinwa kunye nokubandakanya uqeqesho ngexesha nasemva kokuphunyezwa.
Inani elongezelekayo labasebenzisi beNkonzo:Amashumi asibhozo amawaka Smart Single kunye
ISigaba esiThathu se-STS esiDityanisiweyo seemitha zaMandla aHlawulelwa kwaPhambili ezineeNdawo ezivaliweyo zeemitha kunye neZincedisi.